किन हुँदैन हिंसाको प्रतिरोध ? — JagaranMedia.Com
प्रकाशित : २०७५/४/१५ गते
काठमाडौँ — मरेर सहिद हुनेहरू जिएर त हेर जिउन झन् गाह्रो छ । – भूपी शेरचननेपाली समाजमा बाँच्न कति गाह्रो छ, आत्महत्या गर्ने र गर्न खोज्नेहरूलाई जति अरू कसलाई थाहा होला  ? मानवको जस्तो सार्थक जीवन जिउन कति दु:ख, पीडा र अपमान झेल्नुपर्छ, पलपल मृत्यु बाँचिरहेका ‘अछूत’हरूले जति अरू कसले ब्यहोरेको होला  ?
नेपालमा बलात्कार, छुवाछूत, विभेद र हिंसा, जुनसुकै आपराधिक क्रियाकलापमा पनि विशाल संगठन, शक्ति, संरचना वा राज्यको संलग्नता टड्कारो देखिन्छ । स्वास्थ्य, शिक्षामा तिनको संलग्नता विरुद्ध प्रतिरोध नभएको होइन, तर त्यस्तै प्रतिवाद छुवाछूत, विभेद, बलात्कार र हिंसामा भएको छैन । बरु तिनकै शरण वा समर्पणको आधारमा ‘न्याय, सेवा, सहुलियत’ पाउने प्रवृत्ति प्रबल छ । त्यसको अर्थ सामूहिक प्रतिवादको बेसी जरुरत छ, जसको सम्भावना केसीको अनशनसँगै उर्लेको जनसमर्थन र संघर्षले देखाइसकेका छन् । अब यस्ता संघर्षलाई लोकतन्त्रीकरण र जनमुखीकरण जरुरी भएको हो कि ? अब उत्पीडित वर्ग–वर्ण–जात–लिंगविरुद्ध जारी हिंसाको प्रतिरोध आवश्यक भएको हो कि  ? साभार-कान्तिपुर